ယမနျနညေ့မှာပဲ ခဈြရတဲ့ကြေးဇူးရှငျဖခငျကွီးဆုံးပါး သှား ခဲ့ တဲ့အတှကျ ၀မျးနညျးပူဆှေးနရေတဲ့ နက်ခတျ – XB Media Myanmar
ပရိသတျကွီးရေ…….သရုပျဆောငျ မငျးသားခြောလေး နက်ခတျကတော့ MRTV-4 ဇာတျလမျးတှဲလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှကွေားမှာ လူသိ မြားအောငျမွငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ…..။ သူဟာ ကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့သူဖွဈပွီး “ထာဝရမန်တလေး၊ အရိပျ၊ ကြှနျ တျောအမုနျးဆုံး ကြှနျတျော” စတဲ့ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲတှမှော အောငျမွငျမှုရရှိခဲ့ပွီး ပရိသတျအားပေးခဈြခငျမှုရရှိထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ နျော။
နက်ခတျဟာ ‌ရိုးရိုးအေးအေးနတေတျတဲ့သူလေးဖွဈပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျနသေူတဈယောကျဆိုလညျးမမှားပါဘူး။ အခု လိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ နက်ခတျဟာ မကွာသေးမီကတော့ သူ့ရဲ့ Facebookစာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ၀မျးနညျးဖှယျအကွောငျးအရာလေးကို မြှဝလောခဲ့ပါတယျ။
နက်ခတျဟာ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကနြျောခဈြ ရ တဲ့ အ ဖေ ကနြျော တို့ ကို ထား သှားခဲ့ ပီ အဖရေဲ့ ဆုံး မ စကား တှေ နဲ့ သား ဘ၀ ကို အ ကောငျးဆုံး နထေိုငျ ပါ့ မယျ။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပွီးရေးသားထားခဲ့တာပါ။ နက်ခတျရဲ့ ဖခငျဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ပရိ သတျတှမြေားစှာ စိတျမကောငျးဖွဈပွီး အားပေးစကားပွောနကွေတာလညျးတှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေး လိုကျ ပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ…….သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောလေး နက္ခတ်ကတော့ MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေနဲ့ ပရိသ တ်ေ တွကြားမှာ လူသိ များအောင်မြင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…..။ သူဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နို င်တဲ့ သူဖြစ်ပြီး “ထာဝရမန္တလေး၊ အရိပ်၊ ကျွန် တော်အမုန်းဆုံး ကျွန်တော်” စတဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ အော င်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော်။
နက္ခတ်ဟာ ‌ရိုးရိုးအေးအေးနေတတ်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ယော က်ဆိုလ ည်းမမှားပါဘူး။ အခု လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ နက္ခတ်ဟာ မကြာသေးမီကတော့ သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာ ကနေတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေအတွက် ၀မ်းနည်းဖွယ်အကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။
နက္ခတ်ဟာ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကျနော်ချစ် ရ တဲ့ အ ဖေ ကျနော် တို့ ကို ထား သွားခဲ့ ပီ အဖေ့ရဲ့ ဆုံး မ စကား တွေ နဲ့ သား ဘ၀ ကို အ ကောင်းဆုံး နေထိုင် ပါ့ မယ်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပြီးရေးသားထားခဲ့တာပါ။ နက္ခတ်ရဲ့ ဖ ခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပရိ သတ်တွေများစွာ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အားပေးစကားပြောနေကြတာ လ ည်းတွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက် ပါတယ်။